Dukaan caanka ah ee dual-dego caanbaha adduunka ugu caansan, Anker, wuxuu ku kacayaa kaliya $ 9,79 xilligan - BGR - TELES RELAY
ACCUEIL » heshiisyo Dukaan caanka ah ee caanka ah ee dunida caan u ah, Anker, wuxuu ku kacayaa kaliya $ 9,79 xilligan - BGR
Qof walba wuu ogyahay in Anker uu soo saaro qalabka rakibaadda ugu wanaagsan, oo ay kujiraan, dabcan, xamuulka baabuurta. Xaqiiqdi kuma khaldami kartid midkoodna, laakiin waxaa jira mid gaar ahaan ay tahay inaad hubiso Khamiista. Dukaan qafaalashada dekada Anker Mini si la yaab leh waa loo wadaagayaa, laakiin weli waxay kugu dallici kartaa laba qalab isku mar iyadoo ay uga mahadcelineyso isku xirka dekedda USB. Adeegso lambarka kuubannada ee ANKERMETAL2 oo waxaad ku iibsan kartaa mid hadda ka yar $ 10!
Adeegga Labaad - Laba dekedood oo USB-A ah ayaa bixiya awood isku-darka oo ah 24 watts - waxay ku dallacayaan taleefannada 2 hal mar. (Aan la jaanqaadi karin Kusoo Dhaweynta Degdegga ah ee 'Qualcomm Quick Charge').
Ultra-compact - Naqshadeynta Ultra-compact waxay ilaalisaa meel bannaan, iyadoo u oggolaaneysa marin aan xaddidneyn inta ka harsan dashboardkaaga.
Birta culus - Waxay ku dhammaatay dusha sare xoq
Walxaha Tayada Sare leh - Wareegyada-Dahabka Dahabka ah Waxay Yareeyaan Heerkoda Iyadoo Lacagtu Tahay Inay Sare U Qaado Xawilaadda Tamarta iyo Waxqabadka
Maxaad helaysaa - 2 power alloy gaadhiga qiiqa sigaarka shidan, hagitaan soo dhaweyn leh, bishaan bilaash ah ee 18 iyo adeegga macaamiisha saaxiibtinimo.
Raac @BGRDeals on Twitter si aad ula socoto si aad ula socotid waxyaabaha ugu dambeeyay iyo kuwa ugu waaweyn ee laga helo webka oo dhan. Tirada ayaa laga yaabaa inay koobnaato. Qiimayaashu waa isbeddelayaan ogeysiis la'aan iyo kuubannada ayaa dhici kara wakhti kasta. Qaar ka mid ah deeqaha ayaa laga yaabaa inaysan u heli karin dhammaan macaamiisha. BGR waxay heli kartaa komishanka amarada lagu meeleeyay sheygan.
Walmart waxay bilaabeen iibinta maalmaha 3 maalmood ka hor Black Friday - halkan waa heshiisyada ugu fiican - BGR